स्थायी सरकारका लागि बाम गठबन्धनलाई भोट
मेरा पिताजीले २००७ साल माघमा वीरगञ्ज नजिकैको रक्सौल नाकाबाट नेपाली काँग्रेसको तर्फबाट १८ दिन जेल खाएको घटना अरूका लागि महत्त्वपूर्ण नहुन सक्छ तर मेरो परिवार र मष्तिष्कका लागि निकै महत्त्व राख्दछ । भारतको मुम्बईबाट बहुदलवादी पर्चा बोकेर रक्सौल नाकाबाट नेपाल छिर्न खोज्दा उहाँसँगै दुईजना समातिएको कुरा पिताजीले राजनीतिक कुरा गर्दा सधैंजसो भन्ने गर्नुहुन्थ्यो । २००७ … Read more
प्रदेश–२ को सन्देश : आत्मसम्मान सबैको बराबर
मिथिला सभ्यताको केन्द्र जनकपुरमा भेटिएका प्राध्यापक सुरेन्द्र लाभ भन्दै थिए, तेस्रो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचनमा प्रदेश–२ मा राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) पहिलो शक्ति बन्छ। चुनावको पूर्वसन्ध्यामा प्रदेश–२ का सप्तरीदेखि पर्सासम्म ८ जिल्लाको बस्तुस्थिति बुझ्न हामी पनि पुगेका थियौं। ८ दिने भ्रमणमा स्थानीय मत बुझ्दा लाभको भनाइमा विश्वस्त हुने आधार भेटिएन। सिरहा पुग्दा नागरिक दैनिकका स्थानीय … Read more
संस्कृति पुस्ता दर पुस्ता हस्तान्तरण हुन्छ । एक पुस्ताबाट अर्को पुस्तामा संस्कृतिको हस्तान्तरण केवल मानव समाजमा मात्रै सम्भव हुन्छ । पृथ्वीमा मानिस बाहेक कोही पनि जीवमा यो सीप, क्षमता, गुण र ज्ञान छैन । खानपिन, रहनसहन, रीतिरिवाज विगतका ज्ञातअज्ञात पुस्ताको सम्पदाका रूपमा वर्तमान पुस्ताले अंगिकार, उपभोग र उपयोग गरिरहेको छ । समयसापेक्ष संस्कृतिलाई परिमार्जन गर्न … Read more
पीडितहरूको घाउमा मलम लगाउन पाउँदा…
पहाडमा जाडो बढे तराईले सेक्नुपर्छ, आँधी आए तराईमा पहाडले छेक्नु पर्छ ! होइन भने देशभक्ति छैन हाम्रो छातीभित्र, माटोलाई चोट लाग्दा मुटुहरू रुनु पर्छ !! साउन २९ गते आइतबार, साँझ ७ बजे । काठमाडौंको लाजिम्पाटस्थित कोठामा एक्लै छु । आज दिनभरी मन विचलित भइरह्यो । छटपटी भइरह्यो । न कलेजमा पढ्ने मन लाग्यो, न रेडियोमा … Read more
दोक्लम समस्या र नेपालमा त्यसको प्रभाव
भू–राजनीतिका कारण नेपाल संवेदनशील अवस्थामा छ । यो दोक्लम भन्ने स्थानबाट नजिक पनि छ । त्यसकारण नेपाल विभिन्न चिन्ताहरूबाट गुज्रीरहेको छ । त्यसमा पनि मुख्यतया दुईवटा समस्या यसको सामु चुनौतिको रूपमा उभिएका छन् । नेपालको प्रथम समस्या आन्तरिक हो र दोस्रो बाह्य समस्या हो । जसलाई नेपाली सचेत नागरिक, सुरक्षाविद्, अर्थविद्, उद्योगपति, राजनीतिक नेतृत्व, सुरक्षा … Read more
सन्दर्भ : विश्व स्तनपान सप्ताह- आमाको दूध र स्तनपानको महत्त्व
विश्व स्तनपान दिवश हरेक वर्ष अगस्ट १ देखि अगस्ट ७ तारेखसम्म विश्वभरी मनाइन्छ । स्तनपान सप्ताह सर्वप्रथम सन् १९९२ मा डव्लुएबिए (World Alliance for Breast feeding Action) ले सुरुवात गरेको हो । पछि विश्वका एक सय २० भन्दा बढि देशमा युनिसेफ (United Nations International Children Emergency Fund), डब्लुएचओ (World Health Organization) ले मनाउन थाले । … Read more
प्रेस स्वतन्त्रता संकुचित पार्ने प्रयास
असारको अन्तिम साता भौतिक आक्रमणमा परेका बाजुराका पत्रकार छक्क मल्ल यतिबेला उल्टै प्रहरी हिरासतमा रहेका छन् । बाजुराको बुढिनन्दा नगरपालिकाको पोरखेको ओरालोमा बाह्र दिनअघि दिउँसै एक समूहले पत्रकार मल्ल र उनीसंगै रहेका नगरपालिकाका कर्मचारीहरूमाथि सांघातिक आक्रमण गरेको घटनामा संलग्न दोषिमाथि कारबाही प्रक्रिया अघि बढिरहँदा अचानक उनीमाथि नै आरोप लगाएर प्रहरीमा मुद्दा दर्ता गरिएको छ । … Read more
विगतमा नेपाल सामन्ती राजतन्त्रात्मक र बेला–बेलामा उदय हुने विभिन्न जहानियाँ शासनबाट जकडिदै आएको इतिहास साक्षी छ । नेपाली जनताले त्यसबाट मुक्ति पाउन लामो लोकतान्त्रिक लडाइँ लड्नु परेको थियो विदीत छ । लोकतान्त्रिक प्रणाली स्थापना गरी यसको प्रयोगमा अगाडि बढ्दा पनि बारम्बार निरंकुश राजतन्त्रविरुद्ध लडिरहनु परेको हाम्रो इतिहास सुरक्षित छ । राजतन्त्रको अढाई शतकको पञ्जाबाट नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा … Read more
स्थानीय निर्वाचन लोकतन्त्रको जीत
अब केही दिनमा दोस्रो चरण निर्वाचनको नतिजा आइसक्ने छ । मतदाताहरूले आफ्नो विवेक प्रयोग गरी मत जाहेर गरेका छन् । मत गणना गर्दा केहीले जिते केहीले हारे । यो लोकतन्त्रको स्वभाविक प्रकृया हो । आफूले मत दिएको प्रतिनिधिले जितोस् भन्ने लाग्नु सामान्य मानवीय स्वभाव हो । जीत हुँदा खुसी हुने र हार हुँदा दुःखी हुने … Read more
टीकापुर घटनापछिका आयाम
अरु सहरजस्तै मर्निङ वाक र चियाको चुस्कीमा रमाउँदै सुरु हुन्छ, टीकापुरको दैनिकी। आ–आफ्नै उमेर समूह र कुरा मिल्ने, मन मिल्नेहरूको जमात चिया पसलमा राजनीतिदेखि विकास निर्माणको विश्लेषणमा व्यस्त हुन्छ, बिहानभरि टीकापुर। टीकापुर घटनापछि भने चिया पसलको रंग पनि बदलिएको छ। विशेषगरी थारु समुदायका मान्छेहरूको उपस्थिति चिया पसलहरूमा शून्यप्राय नै बनेको छ। रंगीविरंगी इन्द्रेणीझैं लाग्ने टीकापुरको … Read more